जीवनमा घटनाक्रमलाई पर्दामा एक पछि अर्को गरी ओल्टाइपल्टाइ हेर्दै गर्दा सम्पूर्ण अहम् मेटिएर जान्छ । दु:ख आफैलाई नपर्दासम्म महसुश गर्ने निष्फल प्रयास मात्रै हुने रहेछ । कुनै दिन आँफैलाई पर्दा भने भीरबाट खसे जस्तै हुन्छ । स्वस्थ रहँदासम्म जीवनमा आकांक्षा धेरै हुन्छन् । दुनियाँ कुरा जीवनको प्राथमिकतामा परेका हुन्छन् । धन सम्पत्ति एेश आदिको आर्जनमा जीवन पुरै ब्यतित हुन्छ । आफ्नो शरीरका अङ्गहरु कत्तिको कष्टमा छन् भनेर हेर्ने फुर्सद निकालिँदैन।
फुर्सद त केवल अस्वस्थ हुँदा हुन्छ । नमीठो फुर्सद हुन्छ । रोगको प्रकृतिअनुसार मनग्गै फुर्सद पाइन्छ अस्पताल सैयामा । बाध्यताले सिर्जना गरेको फुर्सद हो त्यो । तर आफ्नो फुर्सद हुँदा बाँकी जगतको फुर्सद हुँदैन ।
एक जना अस्वस्थ हुनाले परिवार र इष्ट्मित्रलाई समेत फुर्सद निकाल्न पर्ने हुन्छ । स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने फुर्सद नहुँदा अस्वस्थ भएर फुर्सद पाउँदा पछुतो हुन्छ ।
शायद यिनै बिचारका तरङहरु केही महिनापूर्व अपर्झट एक हर मुडोजस्तो हुन पुगेकी हर्कबाहादुरको मनबाट मन्थन भएका विचार होलान् । त्यसैले त अचेल उनी आफ्नो नियमित चेकजाँच गराउन ओ पि डि मा देखा परिरहन्छन् । प्रेसरको औषधी नियमित सेवन गर्छन् । र चुरोट पनि परित्याग गरेका छन् ।
करीब दुई महिनापूर्व एमर्जेन्सी ड्युटिमा हुँदा रातीको ११ बज्दै गर्दा अन्दाजी ४५ बर्षको खाइलाग्दो शरीर देखिने एक पुरुष ब्यक्तिलाई आफन्तजनले एक्कासी यमर्जेन्सीमा आत्तिँदै लिएर आउँछन् । मोबाइलमा केन्द्रित मेरो ध्यान भंग हुन्छ । ती व्यक्तिको मुख बांगिएको रहेछ । दाहिने हर नचल्ने भएछ । बोली लर्बरिँदै गएछ । आँखाले बाँया तर्फ मात्रै हेरेको देखिन्छ । बोलेको नबुझिने, एकतर्फी हातखुट्टा नचल्ने देखेर पक्षघात भएको अनुमान लगाउन कत्ति बेर लागेन ।
करीब डेढ घण्टा अगाडि एक्कासी त्यस्तो लक्षण देखिएर अस्पताल कुदाएका रहेछन् । प्रेसरको औषधी सेवन नगर्ने मुढे अठोट लिएका अर्धज्ञानी मान्छे रहेछन् उनी ! समयको लीला न हो । लक्षण नभएसम्म नखाने जिद्दी गरेकोमा एक्कासी बज्रपात् भएर पक्षघात देखियो ।
टाउकोको सि टि स्क्यान तुरन्तै गर्न लगाएर हेर्दा रगत जमेको देखिएन । अर्थात् अहिलेको उपलब्ध उपचार पद्धती अनुसार लक्षण सुरु भएको ४. ५ घण्टा भित्रमा औषधी दिन सकेमा पक्षघात फर्किन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
जीवनभर कुनै हर नचलेर, बोली नफर्केर अरुको साहारा लिएर जिउनुपर्ने बाध्यता बाट जोगाउन सकिने एउटा प्रभावकारी उपचारबाट कोही पनि बन्चित हुनुहुँदैन भन्नु अतिसयोक्ती हुँदैन होला ।
घर रुकुम थियो उनको । काठमाडौ कुनै अरु काम विशेषले आएर फर्किने योजना रहेछ त्यो दिन । तर काम पूरा हुन नसकेको हुनाले फर्किन नसकेका रहेछ्न् । भाग्यवादमा विश्वाश नगरेपनि काम फत्ते नहुनाले उनलाई बिपत्तीमा उपचार सहज हुन जुरेछ । थोरै समय भएकोले उपचार पद्धतिको सम्पूर्ण फाइदा बेफाइदाका कुराहरु बुझाएर औषधी प्रयोग गर्ने कुरामा सहमति बन्यो । तर समस्या एउटै मात्र रह्यो । पैसाको समस्या । समय थोरै ,पैसा लाग्ने धेरै । तर उपचारको सफलता खुशीलाग्दो हुने सम्भावना बढी ।
चल्दै नचलेको हातखुट्टा चल्दा र नफुटेको बोली पुन: फुट्न थाल्दा खुशी किन नहोस् त ! यस्तो अवस्थामा कति तनाव हुन्छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीले मात्रै बुझ्न् सक्छन् । एकातर्फ दीर्घकालीन अपाङ्गताबाट जोगिन सकिने उपचार छ भने अर्को तर्फ समयको कडा पावन्दी र औषधीको चर्को मूल्य छ । मात्रै ४.५ घन्टाको समय ।
विपतले खबरदारी गरेर आउँदैन । आउँदो हो त पूर्वतयारी गर्न मिल्थ्यो । रगतका गुच्छाहरु मात्तिएर ,उछिट्टिएर मस्तिष्कका रक्तनलीमा ब्लक गर्छ । मस्तिष्क रगत संचार विना केही सेकेन्डमा छट्पटिन र मर्न थाल्छ । जसको परिणाम स्वरुप प्यारालाइसिस हुने गर्छ । त्यही रगत सन्चारको बाटो ब्लक भएको नशा समयमै खोल्नका लागि त्यो औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर एकैपटक १५ मिनेट भित्रमा सालाखाला १ लाख रुपैयाँ तिरेर उपचार गर्ने औषधी किनेर ल्याउनु भन्दा जो कोहीलाई धौ धौ हुन्छ ।
अचानक परिआएको प्यारालाइसिसको भुइँचालोमा औषधिको पैसा जोहो गर्ने पराकम्पनले सेकेन्ड सेकेन्डमा मनमा झड्का दिइरहन्छ । त्यसमाथि उपत्यका बाहिरको यहाँ कोही चिनाजानी नभएको मान्छेलाई त हम्मेहम्मे हुन्छ । न बैंक खुलेका हुन्छन् । न त य•टि• यम् भए पनि एकैपटक त्यति पैसा निकाल्न सकिन्छ । नगदी पैसा पनि नहुन सक्छ । कस्तो तनाव हुन्छ होला । अनुमान लागाउन सकिन्छ त ?
वजन अनुसार औषधीको मात्रा दिनुपर्ने हुँदा त्यो खाइलाग्दो शरीरलाई १ लाख भन्दा बढी नै लाग्ने निस्चित थियो । त्यो बेलामा त त्यो शरीर दुब्लो भएको भए धेरै जाती हुने थियो जस्तो लागेको थियो ।
पैसा नतिरेसम्म फार्मेसिबाट औषधी उपलब्ध नहुने भयो । यो क्रममा ४. ५ घण्टाको सुनौलो समय बित्दै जान्छ । त्यो समय बित्यो भने औषधी प्रयोग गर्ने वैज्ञानिक आधार नै रहँदैन ।
बिपत देख्दा नराम्रो कुराको आंकलन सजिलै गर्ने मनको नैसर्गिक गुण हुने भएर होला । आफ्नो आँखा अगाडि भविष्यको बाङगो शरीर ,लुला हातखुट्टाहरु, लर्वरिएको बोली र परिवारजनको स्याहार सुसारको दृश्य नाचिरहन्छ । परिवारजनको सहयोग नभएर कुनामा पल्टिरहेको अर्धमुडो शरीर र पुठामा हुने गहिरा घाउहरुको कल्पना हुन्छ ।
शायद त्यस्तै कल्पना उपचारमा संलग्न मुख्य डाक्टरले गरेर होला । आँफै जिम्मा बस्ने मौखिक सहमतिमा औषधी जबर्जस्ती लिएर आउँछन् । र औषधी समयमा दिन सकिन्छ । तर यो बिडम्बनाको कुरा हो । यस्तो महत्वपूर्ण उपचारमा सरकारको कत्ति पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । हार्ट याट्याक(हृदयघात) हुँदा भने पैसा पछि तिर्ने उधारो वचनमा पनि मुटुमा जाली रखिने व्यबस्था छ ।
त्यसमा बिपन्न कोष आदिबाट सबैजनालाई सुबिधा दिने गरिन्छ । तर जीवनभर अपाङ्गताको जोखिम बोकेको मस्तिस्ककोघात हुँदा भने फार्मेसिबाट तत्काल पैसा नतिरेसम्म औषधी उपलब्ध नहुने ? कस्तो नसुहाउँदो कुरा ! जसरी क्यान्सर ,किड्नी फेलर, अल्जाइमर आदिमा सरकारबाटै आर्थिक सहयोग गरेको देखिन्छ ।
त्यसरी नै अरु रोगको भन्दा कम खर्च लाग्ने र राम्रो सफलता देखिएको यो मस्तिष्कघातमा प्रयोग हुने औषधी सर्वसुलभ हुनु आपरिहार्य देखिन्छ । सहज व्यवस्थापनका लागि हास्ताक्षरमा दम भएकाहरुको ध्यान जाओस् भन्ने सदिक्षा । केही त पुण्य काम गरौं न बोली भएकाहरुले । संसद भवन एक दिन यस्तो कुराले पनि जुरमुरियोस् न । कुनै एक दिन त यो कुराले पनि मिडियाजगतमा विशेष अग्रस्थान पाओस् न । म त केवल एक मुक दर्शक मात्रै न हो ।